Boorsada Shiinaha Dog saxanka qaybiyaha saldhigga qashinka xayawaanka birta ah oo ay la socdaan soo saarayaasha guddiga calaamadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Shengrui
Bacda saxarada eey bixisa saldhigga qashinka xayawaanka birta ah oo ay ku jiraan loox
Xaruntan qashinka xayawaanka eey ah waxay bixisaa tayada ugu sareysa ee qiime dhaqaale. Rugta xayawaannada eeygu waxay ka kooban tahay wax aan sii idlaanin, aan miridh lahayn, darajo ganacsi, bir sare oo aluminium ah. Waari kara, wax ku ool ah, oo si fudud loo aqoonsan karo
Cabir: 190cm H. Xidhmada: 1set / kartoon.
Xaruntan qashinka xayawaanka eey ah waxay bixisaa tayada ugu sareysa ee qiime dhaqaale. Rugta xayawaannada eeygu waxay ka kooban tahay wax aan sii idlaanin, aan miridh lahayn, darajo ganacsi, bir sare oo aluminium ah. Qashinka daboolan ayaa bixin kara 10-Gallon oo awood kaydineed oo la imaan kara astaamo isku xir ah oo gaar ah, oo loogu talagalay in lagu hubiyo boorsooyinka safka ah lagana hortago wixii dhibco ama dillaac ah. Saldhig kasta oo bacda saxaro ah waxaa kujira wax kasta oo aad u baahan tahay, laga soo bilaabo tilmaamaha si sahlan loo rakibo ilaa sahaydaada ugu horreysa ee boorsooyinka la soo qaado, calaamadda saldhigga qashinka eeyga, isla markaana aad buuxin karto safka si aad u bilowdo! HA KUGU WAQOOBIN INAAD KU BIXISO IN KA BADAN IN AAD TAHAY!
Hore: Furaha birta Rack & Dog Leash Hanger
Xiga: Bixiyaha biladda RUNNER
raaxo kor u qaaday eey quudinta baaquli quudinta gaabis ah ...